Amazinga okushisa aphakathi komhlaba azokhuphuka ngaphezu kuka-2 ° C | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Yize kunengxenye enkulu yabantu emhlabeni engakaqapheli ukushintsha kwesimo sezulu nemiphumela yako emibi nabanye, njengoMongameli uDonald Trump, akakholelwa nakancane kukho, ukunqanda ukufudumala kwembulunga yonke kuyinselelo enkulu kunazo zonke ezibhekene nezinhlobo zabantu ngekhulu lama-XNUMX.
Ukuzama ukugwema le nhlekelele ezodala ukungazinzi okuphelele emhlabeni, iSivumelwano saseParis saqala ukusebenza. Inhloso yalo ibaluleke kakhulu futhi iyadingeka emhlabeni: nciphisa ukwanda kwamazinga okushisa aphakathi komhlaba ngo-2 ° C uma kuqhathaniswa namazinga angaphambi kwezimboni futhi uqhubeke nemizamo yokunciphisa lokhu kwanda futhi ukusimamise ngo-1,5 ° C. Ucwaningo olusha lukhombisa ukuthi lezi zinhloso kuya ngokuya kunzima ukuzifeza. Yini esingayenza?
Ukunqanda ukukhuphuka kwamazinga okushisa kuya ngokuya kuba nzima
Ucwaningo lwezibalo lwenziwe emanyuvesi ahlukene aseMelika (phawula okungaqondakali, ngoba umongameli wabo akakholelwa ekuguqukeni kwesimo sezulu) okuveza lokho amathuba okuthi iplanethi ifinyelele ekwandeni kuka-2 ° C nokuhlala ngaleyo ndlela yi-5% kuphela. Sivele siphonsa izandla zethu emakhanda ethu lapho sibona ukuthi amathuba okufinyelela ukuzinza ku-1,5 ° C yi-1% kuphela.
Lolu cwaningo lushicilelwe ephephabhukwini Ukuguquka kwesimo sezulu. Eminye yemiphumela yocwaningo ngukuthi kungenzeka kakhulu ukuthi phakathi nekhulu leminyaka elizayo Izinga lokushisa lomhlaba likhuphuka phakathi kuka-2 ° C no-4,9 ° C. Ngokuvamile, izinhloso ezibekwe Esivumelwaneni saseParis zifuna ukuvelela futhi ziyiqiniso. Kodwa-ke, noma ngabe esimweni esifanele bekungagcwaliseka kahle, bekungeke kwanele ukugcina ukufudumala kwembulunga yonke kube ngaphansi kuka-1,5 ° C.
Ukuthola ukuthi amazinga okushisa azokwenyuka kanjani njengomsebenzi wokukhishwa kwegesi engcolisa umoya ngonyaka ka-2100, kubhekwe okuguqukayo okuthathu: inani labantu emhlabeni jikelele, umkhiqizo ophelele wasekhaya womuntu ngamunye kanye nenani lokukhishwa kwekhabhoni okukhishwa ngumsebenzi ngamunye wezomnotho.
Lapho nje lezi zinguquko ezintathu sezethulwe kumamodeli abikezela amazinga okushisa njengomsebenzi wokukhishwa komhlaba, kuphetha ngokuthi izinga lokushisa elijwayelekile leplanethi ngasekupheleni kwekhulu leminyaka lizobe lenyuke ngo-3,2 ° C. Baxwayisa ukuthi ijubane lapho kuncishiswa ukukhishwa kwe-carbon dioxide kuya ngomsebenzi ngamunye wezomnotho kuzobaluleka ukunqanda ukushisa kwesikhathi esizayo.
Esinye isiphetho salolu cwaningo ukuthi uma amazinga okushisa aphakathi komhlaba ekhuphuka ngaphezu kuka-1,5 ° C, izinhlekelele ezinkulu zemvelo amazwe amaningi azobhekana nazo ziyoba zimbi kakhulu kunezamanje.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Amazinga okushisa aphakathi komhlaba azokhuphuka ngaphezu kuka-2 ° C ngasekupheleni kwekhulu leminyaka